Kurdiyiinta oo sheegay in Turkiga Diyaarad kasoo rideen mid kalana ka dhaawaceen | XORRIYA NEWS
Home Caalamka Kurdiyiinta oo sheegay in Turkiga Diyaarad kasoo rideen mid kalana ka dhaawaceen
Kurdiyiinta oo sheegay in Turkiga Diyaarad kasoo rideen mid kalana ka dhaawaceen
Ciidamada Difaaca ee Xisbiga Shaqaalaha Kurdiyiinta ee Turkiga (PKK) ayaa soo saaray bayaan ay ku xaqiijinayaan in ay soo rideen diyaarad helikabtar ah oo laga leeyahay Turkiga ayagoona kusoo riday xadka ay wadaagaan Ciraaq iyo Turkiga.
Xarunta Warbaahinta ee Ciidamada Difaaca Dadka Kurdiyiinta (HPG) ayaa soo saartay bayaan ku saabsan howlgaladii ugu dambeeyay ee ay ciidamadooda ka sameeyeen aagga Haftanin kaasoo ka dhanka ahaa ciidamada Turkiga, iyagoona xaqiijiyay in ay soo rideen diyaarad Helikobtar ah, halka mid kalena ay ku dhaawaceen ayagoona ku qasbay in ay dib u laabato.
Bayaanka ayaa waxaa lagu sheegay in “Ciidamada Difaaca Dadka Kurdistan” ay fuliyeen hawlgal militari 16-kii Agoosto, 10:00 aroornimo, kaas oo lagu bartilmaameedsaday helikobtar nooca loo yaqaano “Skorsky” kaasoo dul maraayay Fagaaraha Jarjla ee gobolka Zagros, ayagoona ku guuleysteen inay si toos ah u garaacaan mid ka mid ah diyaaradaha qumaatiga u kaca ee Turkiga.
Waxay intaas ku dareen; “10 daqiiqo ka dib soo ridistii helikobtarka koowaad, ciidamadu waxay ku guuleysteen iney dhaawacaan Helikabtarkii labaad oo aheyd nooca loo yaqaano “Skorsky”, waxayna ku khasbeen inay u cararaan aagga Kofar ee gobolka Golmark ee Kurdiyiinta.
Bayaanka ayay sidoo kale shaaca uga qaadeen in dhankooda uu la geeriyooday xubin ka tirsan ciidamada Karela.